Adeegga iibka kadib & Kiiska - Yantai Jiajia Instrument Co., Ltd.
Adeegga Iibinta Kadib & Kiiska
Bixi adigoo isticmaalaya waxbarid iyo hagid.
Muddada dammaanadda 1 sano Ka dib marka alaabta la helo, macaamilku wuu nala soo xiriiri karaa adeegga iibka ka dib haddii dhibaato jirto.
Haddii alaabooyinka la xaqiijiyay ka dib markii la helay, laakiin ay leeyihiin dhibaato dulqaad inta lagu jiro isticmaalka, waxaan sidoo kale bixin karnaa qalab bilaash ah, macmiilku wuxuu u baahan yahay inuu bixiyo kharashka bixinta.
Dabeecadda miisaanka, fasalka F2 / M1 ama ka hooseeya oo keliya ayaa noqon kara 2nd lagu hagaajiyay.
Macaamiilkeenna qurxoon ee soo iibsaday miisaanka gaari xamuul ah oo ka hortagga warqadda ah oo noo soo dira sawirradiisa oo wata alaabteenna. Waad ku mahadsantahay kalsoonidiisa iyo jawaab celinta wanaagsan.
* Miisaannada miisaanka mitirka qoyaanka
Mitirka qoyaanka waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa shaybaarka ama habka wax soo saarka oo u baahan in si dhaqso leh loo cabbiro waxyaabaha qoyaanka ku jira. Sida warshadaha dawooyinka, warshadaha cuntada, warshadaha kiimikada, beeraha iwm.
Sidee loogu cabiraa mitirka qoyaanka miisaanka?
Hayso badhanka eber-ka inta lagu gudajiro gobolka 0.00g.
Marka shaashadda dhalaalayso, si tartiib ah u saar miisaanka 100g. Qiimuhu si dhakhso leh ayuu u soo baxayaa, ka dib sug inta akhrisku ka istaagayo 100.00.
Ka saar miisaanka, dib ugu soo noqo qaabka tijaabada, habka hagaajinta ayaa la sameeyaa.
Mitir qoyaan cusub waa in lagu hagaajiyaa isticmaalka ka hor. Markii si joogto ah loo isticmaalo, markaa waxay sidoo kale u baahan tahay in si joogto ah loo xisaabiyo. Si loo doorto miisaanka saxda ah iyadoo loo eegayo saxnaanta mitirka qoyaanka ee hagaajinta ayaa muhiim ah. Halkan talo ka hel.
* Miisaannada miisaanka ee miisaanka elektarooniga ah
Guud ahaan, miisaanka elektaroonigga ah waa in lagu cabbiraa 1/2 ama 1/3 ee cabirka buuxa. Nidaamka hagaajinta caadiga ah waa sida hoos ku xusan:
Daar miisaanka, kulaalaya ilaa 15 daqiiqo, oo qiyaas cabirka 0. Kadib isticmaal culeysyo si aad ucibiriso si isku xigxigta, sida 1kg / 2kg / 3kg / 4kg / 5kg, ka dhig aqrinta inay ahaato miisaanka isku midka ah miisaanka, howsha sixitaanka waa la qabtay.
Miisaanno kaladuwan ayaa ubaahan noocyo kaladuwan oo miisaan ah:
Isu dheellitirnaanta 1/100000 dulqaadka iyo cabirka ugu yar 0.01mg waa isku dheelitirnaan heer sare ah. Waxay u baahan tahay in lagu miisaamo miisaanka E1 ama E2.
Isku dheelitirka dulqaadka 1/10000 iyo cabirka ugu yar 0.1mg wuxuu isticmaali doonaa culeyska E2 si loo qiyaaso.
Isku dheelitirka dulqaadka 1/1000 iyo miisaanka ugu hooseeya 1mg wuxuu isticmaali doonaa culeyska E2 ama F1 si loo qiyaaso.
Isku dheelitirka dulqaadka 1/100 iyo cabirka ugu yar 0.01g ayaa isticmaali doona miisaanka F1 si loo qiyaaso.
Miisaanka leh dulqaadka 1/100 iyo cabirka ugu yar ee 0.1g wuxuu isticmaali doonaa culeysyada M1 si loo qiyaaso.
Miisaanka iyo isku dheelitirka waxaa lagu cabbiri karaa qiime u dhigma iyo culeyska fasalka.
* Imtixaanka xamuulka wiishka
Waa hab guud oo loogu talagalay baaritaanka wiishka wiishka. Tijaabada isku dheelitirka wiishka ayaa sidoo kale loo baahan yahay in la isticmaalo culeyska. Cunsurka dheelitirka wiishka ayaa ah mid ka mid ah xuduudaha ugu muhiimsan ee wiishka jarista, iyo halbeegga muhiimka ah ee wiishka si badbaado leh, loogu kalsoonaan karo, raaxo leh kuna shaqeeya tamarta. Ficil ahaan muhiim ah, tijaabada isudheellitirka isugeynta waxaa lagu soo daray mashruuca kormeerka aqbalida. 20kg miisaanka birta lagu tuuro "culeysyada laydi" (M1 OIML miisaanka caadiga ah) oo leh dulqaad 1g ayaa loo isticmaalaa baaritaanka wiishka. Guud ahaan, shirkadaha wiishka waxay ku qalabeyn doonaan culeys yar oo bir ah oo u dhexeeya 1 tan ilaa dhowr tan.
Machadka kormeerka qalabka qaaska ah wuxuu kaloo ubaahan yahay inuu isticmaalo miisaanka birta lagu dhejiyo ee wiishka lagu baarayo. Cabirka guud waa: 20KG miisaanka birta la tuuro (oo ku habboon wax fudud, fudeyd qaadis ah), marka labaadna qaar ka mid ah qeybaha kormeerka ayaa dooran doona nooca birta 25kg.
* Qiyaasta miisaanka culeyska culus / miisaanka xamuulka
* Qaababka Kala-miiridda
Miisaan ku yeelashada geesaha: Dooro miisaanka qiimaha 1 / 3X (X halkii aad ka qaadan lahayd awoodda guud ee miisaanka), ku dheji afarta gees ee barxadda oo si gooni ah u miisaan. Akhriska afar geesood kama bixi karo dulqaad la oggol yahay.
Qiyaasta toosnaanta: Dooro miisaanka 20% X iyo 60% X, ku rid bartamaha miisaanka si gooni gooni ah. Ka dib markaad isbarbar dhig ku samayso akhriska qiimaha miisaanka, weecasho waa inaysan ka badnaan dulqaadka la oggol yahay.
Khariidad toosan: Xulo miisaanka 20% X iyo 60% X, dhig miisaanka caadiga ah bartamaha miisaanka miisaanka miisaanka, si gaar ah u miisaan, oo akhrisku waa in lala barbar dhigaa miisaanka caadiga ah. Leexashadu waa inaysan ka badnaan qaladka la ogolyahay.
Muujinta cabbirka muujinta: Iskucelcelis ahaan culeyska miisaanka oo buuxa 10 qaybood oo isle'eg, u deji qiimaha caadiga ah sida ku cad, ku dheji miisaanka caadiga ah bartamaha miisaanka, ka dibna diiwaangeli akhriska.
* Qiyaasta miisaanka xoolaha
Miisaanka xoolaha ayaa loo isticmaalaa in lagu miisaamo xoolaha. Si loo ilaaliyo saxnaanta miisaanka, culeysyada birta ee birta loo isticmaali karo si loo qiyaaso miisaanka xoolaha.
* Miisaanka gawaarida sita
Waxay ku dhex jirtaa gawaarida gacanta lagu qaado iyo miisaanka wadajira. Iyada oo leh miisaanka gawaarida yar yar, gaadiidka iyo miisaamida ayaa la samayn karaa isla waqtigaas. Ka dhig saadkaaga gudaha-ka mid waxtar leh oo leh qiimo hoose.
* Miisaanka Crane
Miisaanka loo yaqaan 'Crane scales' waxaa loo adeegsadaa culeyska rarka laalaada, oo leh kaladuwanaansho iyo culeys culeys ah, waxay siinayaan xalka dhibaatada sida loo miisaamo culeys aan culeyskiisu saarnayn marka loo eego xaaladaha warshadaha Guud ahaan waxaa loo isticmaalaa warshadaha birta, metallurgy, warshadaha, miinooyinka, xarumaha xamuulka, saadka , ganacsiga, aqoon isweydaarsiyo, iwm, sida rarka, dejinta, gaadiidka, cabirka, dejinta, iwm.
Miisaanka Miisaanka Miisaanka, Shear Beam Load Cell, Miisaan Miisaanka Miisaaniyadda, Miisaanno La Xaqiijiyay, Miisaannada Miisaanka ee Miisaanka Dijital ah, Mass Calibration,